Kedu esi ewepụta aha ngwaahịa na Amazon site na aha na isi okwu?
Ọ dịghị mkpa ka ị kwuo na iji mezuo ahịa zuru ezu nke ngwaahịa gị na Amazon, ịkwesịrị ịnye ndị ahịa niile nwere ike ịga leta gị.N'ikpeazụ, iji meziwanye ọnụego nke ntọghata na ndepụta ngwaahịa gị ma kpughee ọganihu ị nwere ike inweta ego. Ma olee otu esi eme ka ọtụtụ n'ime ihe ndị ị na ere na-apụta n'etiti nsonaazụ ọchụchọ kachasị elu na ebe ahịa ahụ juru juru? Ekwenyere m na isi ihe maka ịga nke ọma azụmahịa gị n'ebe ahụ dị na nchịkọta njirimara ngwaahịa gị. Ma akụkụ kachasị nke ịchọta ndepụta ngwaahịa gị na Amazon dị na nchịkọta ngwaahịa gị, nkọwa na ndepụta nke ihe ịma aka. Mee n'ozuzu, ịkwesịrị ịnwe ihe niile dị na mkpirisi isi nke isi gị na mkparịta ụka dị ogologo iji chọpụta na ngwaahịa gị na Amazon nwere ohere ka mma ka egosiputa na n'elu SERPs. Ka anyị lee otú ị nwere ike isi mee nke ahụ - cheap european vps hosting.
Ịmepụta Ngwaahịa na Amazon
Ka ọ dị mma, ị ga-akọwa nkọwa ziri ezi ma dị nkenke maka ihe ị na-ere ka ndị ọzọ nwee ike ịme mkpebi ikpeazụ ha ime zụrụ gị. Ọzọkwa, ihe a bụ na isi ọrụ gị bụ ebe a bụ ka ọ bụrụ ihe ziri ezi ma dị nkenke - ọ bụ n'ihi na ndị ahịa chọrọ ịhụ kpọmkwem ihe ha na-aga ịzụta.
Ya mere, ebe a bụ isi ihe dị na ngwaahịa Amazon:
aha aha maka mma isi gị.
Ndepụta nke bọmbụ ise nwere ngwaahịa / uru dị mkpa.
Nkọwapụta ngwaahịa nke na-ekpuchi njirimara kachasị nke ngwaahịa ahụ, tinyere ihe ndị eji eme ihe kwa ụbọchị (mmezi ya, ọ bụ ihe gbakwunyere agbatị nke nkwụpụta gị).
Foto ngwaahịa, na-anọchi anya ihe ọ bụla onye ahịa ga-eji ngwaahịa ahụ
Olee otú iji bulie isiokwu aha na Amazon
iji nweta njirimara aha ngwaahịa maka isi ihe dị mkpa na Amazon:
Nwepụta ngwaahịa ọ bụla nwere njedebe 200-ya iji kpuchie nkọwapụta ngwaahịa ahụ.
Akwụkwọ mbụ nke okwu ọ bụla kwesịrị ịbụ isi.
A na-ekwu nọmba niile ka a sụgharịa ya na nọmba.
E kwesiri ka asusu asusu.
Agba / ụda ngwaahịa adịghị achọsi ike ịchọta ya, ma ọ bụrụ na ha bụ nkọwa dị mkpa.
Adịnyela ọnụ ahịaahịa, oke dịnụ, ozi ọ bụla na-ere ahịa, ozi nkwado, ma ọ bụ nkọwa ọ bụla ọzọ (dịka "onye kachasị ahịa," "ire ọkụ," "ezigbo deal," etc.).
Olee otú iji bulie ndepụta nke ihe nkwụpụta
Nke a bụ ụfọdụ n'ime omume kachasị mma maka ịmepụta ndepụta gị nke bọtịnụ na-akọwa ụzọ ziri ezi:
Nke "ezigbo" ndepụta nke isi okwu ga-abụ nke isi okwu isi ise na-egosi n'ụzọ doro anya atụmatụ dị iche iche nke ngwaahịa ahụ nke onye ahịa ga-atụle, dị ka atụmatụ ngwaahịa, akụkụ, izugbe ozi na akwụkwọ ikike, wdg.
Igodo ọ bụla na-amalite kwesịrị ịbụ isi.
A na-atụ aro mkpụrụokwu nke ọ bụla n'ime bọmbụ ọ bụla ka e wee kewapụ ya na semicolons.
Echefula ichepụta ihe niile gbasara ihe.
Dị ka aha aha gị, anaghị agụnye ihe ndị na-esonụ: nkwado, ọnụahịa, ụlọ ọrụ, mbupu, ma ọ bụ onye na-ere ahịa-kpọmkwem ozi - na ị mechara.